Uganda: Caro ka dhalatay canshuurta lagu soo rogay baraha bulshada - BBC News Somali
Dadka reer Uganda ayaa ka cabanaya canshuurta lagu soo rogay baraha bulshada.
Baarlamaanka dalka Uganda ayaa ansixiyay canshuurta bishii May kadib markii madexweyne Yoweri Museveni uu ku cadaadiyay isbedelkan, isagoo ku doodaya in baraha bulshada ay dadka ku dhiira galiyaan wada sheekeysiga sida qaldan loo adeegsado.
Balse dadka qaar ayaa ku doodaya in arrintan looga gol'leeyahay in la xaddido tala bixinada xaasaasiga ah ee ku saabsan dowladda.
Maxay tahay sababta ay dowladda u sameysay arrintan?
Madaxweyne Museveni ayaa ka hadlay arrimaha ku saabsan baraha bulshada, waxa uuna sheegay in dadka qaar ee isticmaalo baraha ay ku baahiyaan fikrado aan dhex-dhexaad ahayn iyo aflagaaddo.
Warqad bishii Maarso Mr Museveni uu u diray wasiirka maaliyadda ee dalka ayuu ku sheegay in canshuuraha baraha bulshada la kordhiyo si dakhiliga dowladda uu u kordho oo loo yareeyo daymaha iyo lacagaha deeq bixiyaasha.
Waxa uu intaasi ku daray in guud ahaan khadka internetka aysan arrintan saameyn doonin sabatoo ah waxaa lagu isticmaalaa wax barashada, cilmi baarista iyo waxyaabaha kale ee ku shaqeeya internetka.
Maxay dadka ka dheheen arrintan?
Dadka intooda badan ayaa sheegaya in arrintan marka laga eego dhanka siyaasadda ay u wanaagsantahay dowladda. Sababtoo ah baraha bulshada waxaa inta badan loo siticmaalaa tala bixinada lagu dhaliilayo dowladda.
Bishii Febaraayo ee 2016, xilligaasi oo ay ku beegnayd doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaaniga ee dalkaasi Uganda, ayaa waxaa gebi ahaanba la xiray isticmaalka baraha bulshada sababa la xiriira amniga. Balse dadka wax dhaleeceeyo ayaa ku doodayay in xiritaankaasi uu xadidday awoddii lagula socon lahaa codbixinta.
Faahfaahin ka soo baxaysa weerar lagu qaaday ciidamada Uganda ee Soomaaliya jooga
Uganda: dibadbax ay dhigeen taageerayaasha xildhibaan la dilay
Miyay awoodaan canshuurtan dadka ku dhaqan Uganda?
Laba boqol oo shilinka Uganda ah marka la sheegayo ma badna balse dadka u ololeeyo arrimaha bini'aadamka ayaa ku doodaya in lacagtaasi ay ku badanatahay dadka saboolka ahi oo doonaya in ay isticmaalaan baraha bulshada.